Kuzocacisa abeBucs ngekusasa lomdlali
ULINDA Mntambo we-Orlando Pirates ebamba ibhola exinwe uJarrod Moroole weStellenbosch FC emdlalweni we-Absa Premiership ngonyaka odlule Isithombe: BACKPAGEPIX
zakhele xaba | March 25, 2020
IMENENJA kaLinda “Figo” Mntambo ilibeke ezandleni zabaqeqeshi be-Orlando Pirates ikusasa lakhe emuva kwezinkulumo zokuthi angase alandele uRulani Mokwena kwiChippa United.
UPalesa Mkhize, wePulse Players Management ophethe izindaba zikaMntambo, utshele leli phephandaba ukuthi nakuba lo mdlali engasitholi kahle isikimu kweZimnyama ngaphansi komqeqeshi uJosef Zinnbauer kodwa ngeke baxhamazele ngekusasa lakhe.
Emasontweni edlule kuvele ukuthi uMntambo noXola Mlambo, bazobuyela kwiChippa esiqeqeshwa nguMokwena obezwa ngaphakathi. UMokwena ukhululwe yiPirates ukuthi ayocija iChilli Boys kuze kuphele isizini ka-2019/2020 esamisiwe ngenxa yegciwane iCoronavirus.
“Sikhulumile noMntambo ngesimo sakhe kwiPirates, wathi ujabule kuleli qembu futhi usafuna ukulwela indawo yakhe. Unenkontileka nePirates okwamanje. Asikho-ke isidingo sokumsusa uma esathanda ukuhlala khona. Okwamanje sizolinda abaqeqeshi basho ukuthi bafuna ukumgcina noma bayavuma abolekiswe. Yebo, uRulani noMntambo basuka kude kodwa lokho akusho ukuthi kufanele ahlale emlandela,” kusho uMkhize.
Indawo kaMntambo usevele uyivulile uMokwena ngokukhomba indlela abadlali abadlala indawo yakhe enkabeni yenkundla, uLehlohonolo Masalesa noKurt Lentjies. Abanye abaxoshiwe nguDiamond Thopola noThabo Rakhale.
Ukumiswa kwemidlalo yePremier Soccer League (PSL) kuphazamise cishe zonke izinto eNingizimu Afrika. Kuze kube manje akwaziwa ukuthi imidlalo izobuya nini njengoba izwe lisazama ukulwa nalolu bhubhane. Ngesonto eledlule uSihlalo wePSL, * -Irvin Khoza, uthe bafuna ukuthi imidlalo iphele ngaphambi kukaJuni 30.
Lolu suku lusho ukuphela kwezinkontileka kubadlali namaqembu abadlala kuwona. Ngakho emuva kukaJuni 30, kunabadlali abazobe bengasenazo izinkontileka.
“Kusezandleni zikasoseshini ukuthi kuzomiswa kanjani uma kufika kuleso simo sezinkontileka. Abadlali banemindeni okufanele bayondle nezikweletu abazikhokhayo. Asithembe ukuthi ngeke sifike kulokho,” kusho uMkhize.